Mandrosoa ny fivarotana marketing amin'ny Passbook | Martech Zone
Mandrosoa ny fivarotana marketing miaraka amin'ny Passbook
Talata, Novambra 27, 2012 Talata, Novambra 27, 2012 Douglas Karr
Vao nanomboka nampiasa aho Passbook amin'ny iPhone-ko rehefa mitsidika an'i Starbucks. Na dia mirehareha amin'ny ahy aza aho Karatra volamena Starbucks, Faly be aho manena ny hatevin'ny kitapoko amin'ny karatra iray. Omeko fotsiny ny barista ny findaiko ary azon'izy ireo atao ny manara-maso ny karatra valisiko eo! Amin'ny fampiasana ny app an'ny Starbuck, azoko atao ny mamerina mampiditra ny karatro amiko avy amin'ny findaiko koa.
Ny Web manaraka dia nanao a apetraho daholo ny momba ny Passbook ary ny fomba tokony hitsambikinan'ny orinasa an-tsambo, fa ny fanehoan-kevitra tao amin'ilay lahatsoratra no tena nahasarika ny saiko. Satria ny Apple integrated Passbook miaraka amin'ny serivisy fampandrenesana azy dia lasa tombony ho an'ny orinasa manosika ny vaovao farany ho an'ireo mpampiasa azy ny pass.
Ity misy hevitra avy amin'i Jim Passell momba ilay lahatsoratra, manazava ny valiny lehibe indrindra amin'ny fampiasam-bola:
Ny mpanjifako rehetra izay nahazo ny iray amin'ireo pasiko dia mahazo fanavaozana isan-kerinandro amin'ny tolotra vaovao. Namelombelona na nampandre azy ireo ny pasany. Na mandefa fanambaràna momba ny varotra ho avy aho, na naoty manokana avy amin'ny mpitantana fivarotana, na inona na inona. Noho izany ny pass-ko dia mijanona eo an-tampon'ny poketran'izy ireo ary lasa fantsom-pifandraisana amin'izy ireo. Tonga mpanjifa maharitra izy ireo, na dia clipper-coupon fotsiny aza no natombok'izy ireo.
Andao hatrehana izany. Tratry ny olan'ny sivana spam ny boaty fampidirana ary manjary moana ny marketing amin'ny mailaka ny mpanjifa. Na dia mbola misy aza ny tambin'ny fampiasam-bola tsy mampino noho ny vidin'ny mailaka ambany dia mitombo ny olana. Teknolojia fanosehana mahafinaritra iray hafa ny fandefasan-kafatra an-tsoratra, fa matetika ny mpanjifa misalasala amin'ny famandrihana sy famoahana ny nomeraon-telefaonany hahazoana fidirana. Mandrosoa fampandrenesana amin'ny alàlan'ny rindranasa finday sy fampiharana toa ny Passbook mety ho tsara indrindra aminao manosika marketing fahafahana.
Efa niresaka koa izahay Geofencing, tetikady marketing eo akaiky eo izay mampiditra SMS (hafatra an-tsoratra) na marketing amin'ny Bluetooth. Raha vantany vao tafiditra eo ny fitaovanao finday dia azonao atao ny manery ny fampandrenesana. Eny, Passbook dia manolotra geolocation ho tetikady ihany koa. Azonao atao ny manery ara-bakiteny fanavaozana mandalo rehefa misy olona tonga eo akaikin'ny toerana jeografika iray. Ny tsara indrindra dia tsy mila teknolojia fanampiny ianao hanohanana azy satria namboarina avy hatrany amin'ny serivisy geolocation finday.
Koa satria ny Passbook dia efa mitaky fisoratana anarana tapakila, pass pass, coupon na programa tsy fivadihana, ireo dia mpampiasa anao be zotram-po ihany koa. Izy ireo dia efa nanenjika mavitrika ny fifandraisana amin'ny orinasanao. Ary tsy voafetra ho an'ny fitaovan'ny iOS ihany ny fanohanana, efa nivoatra ny Attido Mobile PassWallet, fampiharana Android izay manompo ny fonosana mahazatra ihany koa.
Azonao atao ny mamolavola ny Pass misy anao miaraka amin'ny rindranasa iOS anao amin'ny alàlan'ny tranombokin-tany, na afaka mampiasa SDK toa anao ianao Passslot. Ny orinasan'ny fampandrosoana sy fitantanana antoko fahatelo dia misy WalletKit, Passdock, PassTools, PassPages, PassRocket ary PassKit.
Tags: geolocationhaitao findaynitrangapassbook paoma passbookpassdockpasskitpasspagespassrocketpassslotpasswalletmanosika marketingteknolojia fanosehanakitapom-bola
Ampio ny drafitry ny gorodonao amin'ny Google Maps
27 Novambra 2012 à 5:43
Izaho no mpanorina/Tale Jeneralin'ny PassTools, ary izahay dia iray amin'ireo mpitarika ny toerana fananganana passe mipoitra. Mankasitraka anao mampiditra anay amin'ny lisitrao koa.
27 Novambra 2012 à 10:56
vita! Misaotra Joe!
28 Novambra 2012 à 12:12
Tsara soratra Douglas!
Mitarika ny ekipan'ny vokatra ao amin'ny Vibes aho (http://www.vibes.com), orinasa teknolojia ara-barotra amin'ny finday izay miara-miasa amin'ireo marika sy mpivarotra mba hamoronana fifandraisana eo no ho eo sy maharitra amin'ny mpanjifany. Manao filokana kely amin'ny Passbook izahay, efa manana ny fahaiza-mitantana ny tsingerin'ny fiainana Pass (mamorona - manatitra - mitantana - manadihady - tanjona indray) ao amin'ny sehatray. Nanangana Fandaharana Beta Passbook izahay ary manana marika nasionaly lehibe maromaro mitady hampiasa ny fahaizan'ny Passbook ho ampahany amin'ny paikady ara-barotra amin'ny finday midadasika kokoa.
Te hanakoako ny fientanentananao momba ny Passbook aho. Mino aho fa hanova ny fomba ifandraisan'ny marika amin'ireo mpanjifany mahatoky ary indraindray tsy mivadika. Ary efa nanosika an'i Google hieritreritra indray ny paikadiny Google Wallet.
28 Novambra 2012 à 4:51
Lahatsoratra tsara, ary misaotra amin'ny fizarana ny safidy fampandrosoana pass. Raha jerena ny sandan'ny mpanjifa sy ny mpivarotra, dia mahagaga fa betsaka ny orinasa mbola tsy nitsambikina tamin'ny fampidirana ny tenany ho Passbook. Marina ny anao, tena mety ho an'ny mpanjifa izany (efa nampiasa ny fampiharana Starbucks ny tenako hatramin'ny nividianako ny iPhone5), ary azo antoka fa toa fomba mahomby indrindra amin'ny tsena amin'ny mpihaino reraky ny fampahalalana ankehitriny. Miandrandra ny hahita orinasa maromaro manatevin-daharana ny Passbook, ary manala ny plastika ao amin'ny poketrako.
Jan 17, 2013 ao amin'ny 6: 14 AM
Lahatsoratra lehibe Douglas ary misaotra amin'ny filazana.
Ny fahaiza-manosika angamba no singa sarobidy indrindra amin'ny Passbook. Ny mpanjifanay sy ny mpiara-miombon'antoka dia talanjona foana rehefa niaina voalohany ny hafatra hidin-trano sy ny 'fanavaozana manodidina'. Izany koa dia manampy azy ireo hampiditra tsara kokoa ny Passbook Pass amin'ny orinasany, ary hifanerasera amin'ny mpanjifany. izany hoe tsy mametraka fanoloana nomerika amin'ny tapakila static na karatra mahatoky fotsiny izy ireo.
Na iza na iza dia afaka miaina an'ity 'fanavaozana fanerena' ity ho an'ny tenany izao. Ampidino fotsiny ny pass 'AbraKebabra' avy amin'ny pejinay ary atsipazo ny Pass mba hampifandraisana amin'ny URL Fanavaozana Pass. Ity lahatsary haingana ity dia mampiseho ny fomba hanaovana izany: http://youtu.be/D7i7RsP3MvE
Raha mbola tsy niaina Passbook Push ianao dia mendrika ny hanandrana azy; ary raha ny santionany AbraKebabra Pass dia mampiseho fanavaozana fifandanjana, tsy misy fetra ny fahafaha-manao (satria azo havaozina sy 'atosika' ny sehatra rehetra)